Ihowuliseyili INYATHELO INYATHELO HCV Uvavanyo (Igazi elipheleleyo / iSerum / iPlasma), abavelisi besixhobo sovavanyo lweHCV olukhawulezayo kunye nabathengisi | HEO
Indlela ngokubanzi yokufumanisa usulelo kwi-HCV kukujonga ubukho be-antibodies kwintsholongwane ngendlela ye-EIA elandelwa kukuqinisekiswa yi-Western Blot. UVavanyo lweNqanaba elinye le-HCV luvavanyo olulula, olubonakalayo olusemgangathweni oluchonga izilwa-buhlungu kwigazi / kwi-serum / kwiplasma yomntu. Uvavanyo lusekwe kwi-immunochromatography kwaye lunokunika iziphumo ngaphakathi kwemizuzu eli-15.
Uvavanyo lweNyathelo elinye le-HCV yiColloidal Gold ephuculweyo, ekhawulezileyo yokuvavanywa kwe-Immunochromatoraphic yokufumanisa ubungakanani beentsholongwane kwi-Hepatitis C Virus (HCV) kwi-Human Whole Blood / Serum / Plasma. Olu vavanyo luvavanyo lokuhlola kwaye zonke izinto ezintle kufuneka ziqinisekiswe kusetyenziswa olunye uvavanyo olunje ngeWot Blot. Uvavanyo lwenzelwe ukusetyenziswa kwezeMpilo kuphela. Zombini iimvavanyo kunye neziphumo zovavanyo zenzelwe ukuba zisetyenziswe ziingcali zonyango kunye nezomthetho kuphela, ngaphandle kokuba kugunyaziswe ngenye indlela ngummiselo kwilizwe lokusetyenziswa. Uvavanyo akufuneki lusetyenziswe ngaphandle kolawulo olufanelekileyo.
I-assay iqala ngesampulu esetyenziswe kwisampulu kakuhle kunye nokongezwa kwesampulu enikezelweyo ngokukhawuleza. I-HCV antigen-Colloidal Gold conjugate efakwe kwisampulu yesampulu iphendula kunye ne-HCV antibody ekhoyo kwi-serum okanye iplasma, eyenza i-conjugate / HCV antibody complex. Njengoko umxube uvunyelwe ukuba ufuduke ecaleni komtya wovavanyo, i-conjugate / HCV antibody complex ibanjwa yiproteni ebophayo elwa nomzimba kwi-membrane eyenza ibhanti enemibala kwindawo yovavanyo. Isampulu engalunganga ayivelisi umgca wovavanyo ngenxa yokungabikho kweColloidal Gold conjugate / HCV antibody complex. Iantigens ezisetyenzisiweyo kuvavanyo ziiproteni eziphindaphindayo ezihambelana nemimandla engasebenziyo yeHCV. Ibhendi yolawulo enemibala kummandla wolawulo ibonakala ekupheleni kwenkqubo yovavanyo ngaphandle kwesiphumo sovavanyo. Eli bhendi lolawulo sisiphumo seColloidal Gold conjugate yokubopha kwi-anti-HCV antibody immobilized kwi-membrane. Umgca wolawulo ubonakalisa ukuba ikhonkrithi yeColloidal Gold iyasebenza. Ukungabikho kwebhendi yolawulo kubonisa ukuba uvavanyo alusebenzi.
IIMPAWU NEZINTO EZIBONELELWEYO
Izixhobo zovavanyo nganye ngefoyile ye-pouches nge-desiccant
• I-plastic dropper.
• Isampulu yoDiluent
• Faka ipakethe
Ulawulo oluchanekileyo nolubi (olufumaneka njengento eyahlukileyo)
Izixhobo zovavanyo kufuneka zigcinwe ngo-2-30 ℃ kwisingxobo esitywiniweyo naphantsi kweemeko ezomileyo.
Izilumkiso kunye namanyathelo
1) Zonke iziphumo ezilungileyo kufuneka ziqinisekiswe ngenye indlela.
2) Phatha yonke imizekelo ngokungathi inokusulela. Gqoka iiglavu kunye neempahla zokuzikhusela xa uphatha iisampulu.
I-3) Izixhobo ezisetyenziselwa ukuvavanywa kufuneka zicholwe ngaphambi kokuba zilahlwe.
4) Sukusebenzisa izixhobo zekiti ngaphaya komhla wokuphelelwa kwazo.
5) Musa ukutshintshiselana ngeeagents ukusuka kwiindawo ezahlukeneyo.
UKUQOKELELWA KWESAMPULA NOKUGCINWA
1) Qokelela iGazi elipheleleyo / iSerum / iisampulu zePlasma kulandela iinkqubo zelebhu zaseklinikhi eziqhelekileyo.
2) Ukugcinwa: Igazi elipheleleyo alinakuba ngumkhenkce. Umzekelo kufuneka ubekwe efrijini ukuba awusetyenziswanga kwangolo suku lokuqokelela. Iimpawu kufuneka zifriziwe ukuba azisetyenziswanga kwiintsuku ezi-3 zokuqokelela. Gwema ukubanda kunye nokunyibilikisa iisampulu ngaphezulu kwamaxesha ama-2-3 ngaphambi kokusebenzisa. I-0.1% ye-Sodium Azide inokongezwa kwisampulu njengokugcina ngaphandle kokuchaphazela iziphumo zovavanyo.
1) Sebenzisa i-dropper yeplastikhi ebiyelweyo kwisampulu, hambisa i-1 drop (10μl) yeGazi elipheleleyo / iSerum / iPlasma kwisampulu yesetyhula yomgangatho wekhadi lovavanyo
2) Yongeza amathontsi ama-2 eSampuli eDiluent kwisampulu kakuhle, kwangoko emva kokuba isampulu yongezwa, ukusuka kwincam yedrophu yokuthambisa incindi (okanye yonke imixholo evela kuvavanyo olunye).
3) Tolika iziphumo zovavanyo kwimizuzu eli-15.
1) Ukufaka isicelo isixa esaneleyo sesampulu yokuncipha kwisiphumo kubalulekile kwiziphumo zovavanyo ezifanelekileyo. Ukuba ukufuduka (ukumanziswa kwembumba) akujongwa kwifestile yovavanyo emva komzuzu omnye, yongeza enye ilahleko kwisampulu kakuhle.
2) Iziphumo ezincumisayo zinokuvela kwakamsinyane nje ngomzuzu omnye kwisampulu enamanqanaba aphezulu ee-HCV antibodies.
3) Musa ukutolika iziphumo emva kwemizuzu engama-20
UKUFUNDA IZIPHUMO ZOVAVANYO
1) EzintleZombini iibhendi ezibomvu zovavanyo kunye neqela elibomvu lolawulo oluvela kumbala. I-lower the antibody concentration, ibuthathaka ibhendi yovavanyo.
2) Ukungalunganga: Kuphela liqela elibomvu lolawulo olubomvu oluvela kwi-membrane. Ukungabikho kwebhendi yovavanyo kubonisa isiphumo esibi.
3) Iziphumo ezingasebenziyo: Kuya kuhlala kuhlala kukho ibhendi yolawulo ebomvu ebomvu kummandla wolawulo, ngaphandle kwesiphumo sovavanyo. Ukuba ibhendi yolawulo ayibonwa, uvavanyo luthathwa ngokuba alusebenzi. Phinda uvavanyo usebenzisa isixhobo esitsha sovavanyo.
Qaphela: Kuqhelekile ukuba nebhanti yolawulo ekhanyisiweyo kunye neesampulu ezinamandla kakhulu, ukuba nje ibonakala ngokucacileyo.
I-1) Kukucaca, okutsha, nokuhamba simahla kweGazi liphela / iSerum / iPlasma enokusetyenziswa kolu vavanyo.
2) Iisampulu ezintsha zezona zilungileyo kodwa iisampulu ezinqabileyo zingasetyenziswa. Ukuba isampulu sele ikhenkcezisiwe, kufuneka ivunyelwe inyibilike kwindawo ethe nkqo kwaye ihlolwe ukuba ayinamanzi na. Igazi elipheleleyo alinakuba ngumkhenkce.
3) Sukucaphukisa isampulu. Faka ipipette ngezantsi nje komphezulu wesampulu ukuqokelela iSampuli.
Egqithileyo Ikhasethi yovavanyo ekhawulezileyo yeHCV / iStrip / ikhithi (WB / S / P)
Okulandelayo: I-COVID-19 Influenza A + B Ikhasethi yoVavanyo lweAntigen Combo ekhawulezayo